တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကျမနှင့် မျက်မှန်
ကျမ မျက်စိတွေ ဘယ်အချိန်ကတည်းက စပြီး မှုန်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
မျက်မှန်စတပ်ရတာကတော့ မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဆီကပါ။
ဒီ့အရင်ကတည်းက ကျမ မျက်စိတွေ ကြည့်လို့ သိပ်မကောင်းခဲ့ပေမယ့် အမှတ်တမဲ့သာ နေနေမိတယ်။
လသာနေတဲ့ည မိုးပေါ်ကိုမော့ကြည့်ရင် လမင်းက နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်။ နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကြည့်ရင် စာလုံးတွေက နှစ်ထပ်နှစ်ထပ်။ မျက်လုံး တလုံးချင်းမှိတ်ပြီး ကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးက အဆင်ပြေပြီး ညာဘက်မျက်လုံးက မှုန်တုန်တုန်။
အဲဒါကို အထက်တန်းကျောင်းသူ ဘ၀လောက်ကတည်းက သိပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့ မျက်စိက ဒီလိုပဲလို့သာ ထင်ခဲ့မိတယ်။ အဲဒီလောက်ထိ နုံတဲ့ ကျမပေါ့။ ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်ရင်း ကွန်ပျူတာစသုံးဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကစပြီး ဇက်ကြောတွေ တက်တယ်။ ခေါင်းတွေကိုက်တယ်။ အဲဒီလို ဇက်ကြောတက် ခေါင်းကိုက်တာဟာ မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ ဗဟုသုတ မရှိတာကြောင့် ဒီတိုင်း ဆေးလိမ်းပြီး နေခဲ့လိုက်တာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ထိအောင်ပါပဲ။
အဲဒီနှစ်ပိုင်းရောက်မှ မထင်မှတ်ဘဲ ကြုံကြိုက်တာနဲ့ အမေရိကန်ဗီးရှင်းမှာ မျက်စိစမ်းသပ်မိပါတယ်။ စမ်းသပ်ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်၊ ဆရာဝန်တပ်ပေးတဲ့ စမ်းသပ်မျက်မှန်ကြီးကိုတပ်၊ ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရေးထားတဲ့ “ဂ ပ ၁ င ၀” စတဲ့ စာလုံးတွေကို ဖတ်ဖတ်ပြရတယ်။
“ကဲ … ဖတ်ကြည့်ပါအုံး ...အောက်ဆုံး စာတန်းက ဘာလဲ”
“ … … … … …”
ကျမ မျက်စိရှေ့က စမ်းသပ်မျက်မှန်ရဲ့ မှန်ထည့်တဲ့ နေရာလေးထဲ ပါဝါမှန်ချပ်လေးတွေ တခုပြီးတခု ထည့်ရင်း ဆရာဝန်က မေးပါတယ်။
“ဒါဆိုရင်ရော … ခုနက တခုနဲ့ ဘယ်လိုနေလဲ … ပိုမြင်သလား”
“ခုနက ပိုမြင်တယ် ….ဟင် မဟုတ်ဘူး .. ဒါလည်း မြင်တာပါပဲ … ဒါကပိုမြင်တာ ထင်တယ်”
“သေချာကြည့်နော် … ဒီတခု ဆိုရင်ရော … ပိုပြတ်သားသလား”
“ဒီတခုနဲ့ ဟိုတခု … တူတူလောက်လို့ ထင်တာပဲ”
မေးသမျှ မေးခွန်းတွေကို ကျမသေချာ မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ ဇဝေဇ၀ါသာ အဖြေပေးနေရပါတယ်။
မှန်ချပ်လေးတွေ ပြောင်းထည့်တယ် ဆိုတာတော့ သိတယ်၊ အမြင်အာရုံ ဘယ်လိုကွဲပြားတယ်ဆိုတာ ကျမ တကယ်ကို မပြောတတ်ခဲ့ဘူး။ ခပ်ကြာကြာမေးနေရတော့ ဆရာဝန်လည်း စိတ်သိပ်ရှည်ပုံ မပေါ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်နောက်မှာကလည်း ပြဖို့ စောင့်နေသူတွေက တပုံကြီး။ တကယ်တော့လည်း စက်နဲ့ စမ်းသပ်ပြီးသားပါ။ အတိအကျ ဖြစ်အောင် အတိမ်းအစောင်း မရှိအောင် ပြန်စစ်နေတာ ထင်တာပါပဲ။
မျက်စိဆရာဝန် ရှေ့မှာ မေးမြန်းသမျှတွေကို အူကြောင်ကြောင် ဖြေရင်း ဟိုးငယ်ငယ် ၈-တန်း ကျောင်းသူဘ၀က ကြုံခဲ့ဖူးတာကို သွားပြီးအမှတ်ရမိတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကျမ မျက်နှာသစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ရေချိုးရင်ဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေမှာ ခေါင်းလျှော်ရင် လုပ်ပေးသလို နားထဲကို ရေထည့်ထည့်ပြီး ဆေးလေ့ရှိတယ်။ မလုပ်တတ်တော့ နားထဲမှာ ရေကကျန်နေရော။ အဲဒါကို ဂွမ်းကလေးနဲ့ ကြပ်လိုက်၊ ထိုးလိုက် ဆွလိုက် လုပ်တော့ နားက နာပါလေရော။ နားကိုက်တယ် နားကိုက်တယ်ဆိုပြီး ဂျီကျနေတာနဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်းက နားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးဆီ အမေက ခေါ်သွားပါတော့တယ်။ ဆရာဝန်က ကျမ နားအတွင်းထဲကို မီးနဲ့ ထိုးကြည့် ပြီးတော့ tuning fork .လေးကို ဒေါင်ခနဲ မြည်အောင် ရိုက်ပြီး ကျမ နားနားကပ်ပေးကာ နားထောင်ခိုင်းတယ်။
နောက်တခါ နားရွက်ရဲ့ အနောက် နားအုံဘက်မှာ။
“ကြားလား … သမီး”
“ရှေ့က နားထောင်ရတာနဲ့ နောက်က နားထောင်ရတာ … ဘယ်ဟာက ပိုကြားလဲ”
အဲ … အဲဒါမှ ဒုက္ခ၊ ကျမက မဝေခွဲတတ်ဖူး။ ကြားတာတော့ ၂-ခုလုံး ကြားနေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ …. ဉာဏ်ကူမှပဲ … ဆိုပြီး ခပ်ထူထူ ဦးနှောက်နဲ့ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် အပြေးအလွှား စဉ်းစားပါတော့တယ်။
သာမန်ဆိုရင် ရှေ့ကတော့ လူတိုင်းကြားမှာပဲ။ ငါက နောက်ကကြားတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ငါ့ရဲ့ အကြားအာရုံတွေက ပိုပြီးအစွမ်းထက်တယ်လို့ ဆရာဝန် ထင်သွားနိုင်တယ် … ဟုတ်ပြီ ….။
အဲဒီလို ရွှေဉာဏ်တော် စူးရောက်ပြီးသကာလ ခုလို အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်က ပိုကြားတယ်လို့ ပိုတလုံးလည်း မထည့်လိုက်မိဘူး။ ကျမရဲ့ အဖြေကို ရသွားတဲ့ဆရာဝန်ဟာ စိတ်မချမ်းမြေ့တဲ့ မျက်နှာနဲ့ အမေတို့ကို တီးတိုးပြောနေပါတယ်။ သောက်ဆေးတွေ ထည့်ဖို့ဆေးတွေ တပုံတပင် ၀ယ်ရပါသေးတယ်။
အိမ်ရောက်တော့မှ အမေ့ကို ဆရာဝန်ဘာပြောတာလဲ လို့မေးတော့ …
ကျမ နားတွေက တော်တော်ကို အခြေအနေဆိုးနေပြီ … တဲ့။ ခွဲစိတ်ကုသရင်တောင် ပြန်ကောင်းချင်မှ ကောင်းနိုင်မယ် ဆိုပဲ။ အမေကလည်း ကျမအတွက် တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာပါတယ်။ မွေးထားတုန်းက အကောင်းလေး။ ခုတော့ အပင်းလေးဖြစ်ရတော့မယ်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကျမက ကျမရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ပျာပျာသလဲ ပြန်ရှင်းပြရတယ်။
ဒီလိုပါအမေ … တကယ်တော့ …. ။
အမေတို့မှာ ကျမကို စိတ်ဆိုးရအခက် ရယ်ရအခက် … ။
ဘာမှမဖြစ်တာဘဲ တော်သေးဆိုပြီး ကျမကို ဆူလည်း မဆူကြပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာ ခုချိန်ထိအောင်တော့ နားက မပင်းသေးပါဘူး။ အေးဆေးပဲ။ အကုန်ကြားနေရတုန်း။
အဲ … အဲဒါက ရှစ်တန်းကျောင်းသူ အူကြောင်ကြောင်ဘ၀ နားဆရာဝန်နဲ့ ကြုံခဲ့ရတာပါ။
မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် ကြုံရချိန်မှာတော့ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရပြီးနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း ထူတူတူနဲ့ အူကြောင်ကြောင် နိုင်နေတုန်းပါပဲ။
နောက်ဆုံး စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်အရ ညာဘက်မျက်လုံးမှာ ဆလင်ဒါတုံးကြီး ရှိနေပါသတဲ့။ ပါဝါလည်း နည်းနည်း ရှိတယ်။ မျက်မှန်တပ်ရမယ်။ ဘယ်တော့မှ မချွတ်နဲ့။ ရေချိုး ချိန်နဲ့ အိပ်ချိန်ကလွဲလို့ အမြဲတပ်ပါ။
ဒါနဲ့ပဲ မျက်မှန်တလက် ရွေးချယ်ပြီး တပ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဒီ့နောက်မှာတော့ မျက်မှန်ကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်မရ၊ လျှောလျှောကျနေတဲ့ မျက်မှန်ကို ပြန်ပင့်ပင့်တင်ရတာ အလုပ်တခု၊ ဒါနဲ့ပဲ စာကြည့်ချိန်၊ တီဗီကြည့်ချိန်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ချိန်က လွဲပြီး ကျန်တဲ့အချိန်မှာ မျက်မှန် မတပ်တော့ဘူး။ မျက်မှန်သာ သိပ်မတပ်တာ၊ မျက်မှန်က တလက်ပြီး တလက် ကုန်နေတာပါပဲ။
၀ယ်ပြီးခါစ အသစ်စက်စက် ကလေးကို အင်္ကျီရင်ဘတ်မှာ ချိတ်ထားပြီး ဟိုဟာ ဒီဟာ ကုန်းကောက်မိတော့ အောက်ကိုပြုတ်ကျ .. ကွဲအက်။ တခါတလေ မျက်မှန်ကို ကုလားထိုင်ပေါ် တင်ထားမိတာ မသိဘဲ တက်ထိုင်လိုထိုင်မိ။ မျက်နှာနဲ့ မတော်လို့ ကိုင်းကို adjust လုပ်ရင်း ကိုင်းကျိုး။ အဲဒီလိုနဲ့ မျက်မှန်တွေ တလက်ပြီး တလက်ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။
ကျွဲကော်ကိုင်း ခေတ်စားတော့ ကျွဲကော်ကိုင်းမျက်မှန်ကြီး ခပ်တည်တည် တပ်လို့။ သူများ frameless ဆိုတော့ ကိုယ်လည်းပဲ ခေတ်နောက်မကျရလေအောင် လိုက်ပြီး less ရသေးသပေါ့။ တလက်ပြီး တလက်ပြောင်းပြီး ခုနောက်ဆုံး ကျမမျက်မှန်ကလေးကတော့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်ပေါင်း များစွာနဲ့ ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေမတတ် ဖြစ်နေပါပြီ။ အသစ်သွားလုပ်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့ အဲဒါလေးကိုပဲ ပေတေပြီး တပ်နေမိတယ်။ တခြားအချိန်တော့မတပ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်မှ တပ်ဖြစ်တာပါ။
မျက်မှန်ခပ်စုတ်စုတ်နဲ့ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ တချိန်လုံး မှုန်ကုပ်ကုပ် ထိုင်နေတဲ့ ကျမကို အမြင်မတော်တဲ့အမေက သူမျက်စိဆရာဝန်သွားပြရင်း ကျမကိုပါ အတင်းစစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်။
“ဟင့်အင်း … မသိဘူး”
အဲဒီလိုနဲ့ ဆရာဝန်ရှေ့မှောက် တဖန်ရောက်ခဲ့ရပြန်ပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း .. ဆရာဝန်မကြီးက … ဘုတ်ပြားပေါ်က ဟိုလှည့်ဒီလှည့် အပေါ်ဖွင့် အောက်ဖွင့် ဆင်တူရိုးမှား မြန်မာစာလုံးတွေ ဖတ်ခိုင်းပြီး
“အခုတပ်တဲ့ဟာနဲ့ ခုနကဟာ ဘယ်ဟာက ပိုကြည်လင်သလဲ …” အစချီပြီး မေးခွန်းတွေထုတ်တော့တာပါပဲ။
ကျမကလည်း အဲဒီမေးခွန်းတွေကို အလွန်စိတ်ညစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက မဖြေတတ်တဲ့ ဒီမေးခွန်းတွေဟာ ခုထိအောင်လည်း မဖြေတတ်သေးပါဘူး။ ဘယ်ဟာပိုမြင်လဲ ဆိုရင် နောက်ဆုံးပြတာ ပိုမြင်တယ်ချည်းပဲ ဖြေနေလို့ ဆရာဝန်မကြီးက သူ့ဟာသူ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
“တဖက်နဲ့တဖက် သိပ်ပြီးကွာတာ မကောင်းဘူး။ ထိန်းပြီး ကြည့်လို့ရတာပဲ။ ဒါလောက်ဆို ရပါပြီ …” တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာဝန်မကြီး ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ ပါဝါနဲ့ပဲ မျက်မှန်တလက် လုပ်လိုက်တယ်။ ဟိုကိုင်း ဒီကိုင်း ရွေးရင်း နောက်ဆုံးမှာ …ချွေးလည်း မစား၊ ပေါ့လည်း ပေါ့ပါး၊ အကြမ်းလည်း အတန်အသင့်ခံနိုင်တဲ့ ကိုင်းမျိုးနဲ့၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရင် အဆင်ပြေစေမယ့် မှန်မျိုးရွေးချယ်ပြီး မှာခဲ့လိုက်တယ်။
ဒီကနေ့တော့ မျက်မှန်ကလေးရပြီမို့ အမေရိကန်ဗီးရှင်းမှာ သွားရွေးရပါတယ်။
သွားတုန်းကတော့ ဘာမျက်မှန်မှ တပ်မသွားပါဘူး။ မျက်မှန်အသစ်ကလေး ရပြီဆိုမှဖြင့် … ဆရာဝန်မကြီးပြောသလို ရေချိုးချိန်နဲ့ အိပ်ချိန်သာ ချွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားယောင်ပြီး ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ နေသားကျအောင် ကိုင်းကိုချိန်ဆပြီးတဲ့နောက် တခါတည်း တပ်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။
အခန်းထဲကအထွက် … အမြင်အာရုံတွေ တအား လင်းလက်နေသလိုမို့ ရုတ်တရက် လန့်သွားတာပါ။
အောက်ငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်။ ကြွေပြားခင်းထားတဲ့ ကြမ်းပြင်က ကိုယ်နဲ့ ပိုနီးနေသလို။
ခြေတလှမ်းချင်း အလှမ်းမှာ … ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ့်ခြေလှမ်းက သဟဇာတမဖြစ်။ ယိုင်တိုင်တိုင်နဲ့။ ဘေးနားက မှန်ရှိုးကေ့စ် တွေကို ကိုင်ကာ ကိုင်ကာ ခပ်ဖြည်းဖြည်း သွားနေရတယ်။ အပေါက်ဝ ရောက်ပြီ။
အဲ …လှေခါးထစ်။ မြင်ရတဲ့ နေရာမှာ ရှိပါ့မလား။ ခြေလှမ်းကို စမ်းတ၀ါးဝါး စမ်းရင်း တထစ်ချင်း ဆင်းနေမိတယ်။ ၀ှူး … မလွယ်ပါ့လား။
အင်း … တချိန်လုံး မှုန်နေတဲ့ဘ၀မှာ ကျင့်သားရနေတော့လည်း တကယ့် ပကတိ အမှန်ကို မြင်ရပြီဆိုတဲ့အခါ အံမ၀င် ခွင်မကျမှုလေးတွေ ရှိတတ်ပေတာပဲ။ သုံးလေးရက်ဆိုရင်တော့ အသားကျသွားမှာပါ။ မသကာ တပတ်ပေါ့။ ဒီလို အံဝင် ခွင်ကျမဖြစ်တာကို ခံနိုင်ရည် မရှိဘဲ ခါတိုင်းလို မျက်မှန်ကို ပုံမှန်မတပ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျမမျက်စိတွေ ဒီ့ထက်ဒီ အခြေအနေ ပိုဆိုးလာလေမလား … လို့ … ကြည်လင်နေတဲ့ အမြင်အာရုံမှာ နေသားမကျသေးတဲ့ ကျမ … တွေးနေမိပါတော့တယ်။
၂၄၊ မေ၊ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 3:08 AM
hi Ma May,
I am reading and laughing at the same time.
“စက္ခုံ ဥဒပါဒိ”ဆိုတဲ့ စကားလေးကို သတိရတယ်ဗျာ။
5/24/2007 12:44 PM
it wasavery fun post, I was the same way too after putting the spectacles. So far I ve only changed twice,one i lost some where in the college and one still with me now.:P
5/24/2007 3:05 PM